OMN:Oduu waxabajjii 28,2017 ilmaan oromoo oromiyaa keeysaa jiraan | Kichuu
OMN:Oduu waxabajjii 28,2017 ilmaan oromoo oromiyaa keeysaa jiraan
Posted on June 29, 2017 by kichuu_admin
OMN:Oduu waxabajjii 28,2017 ilmaan oromoo oromiyaa keeysaa jiraan dhimma”Dantaa Addaa finfinnee”maal jedhan?
FincilaOPDO . Waggaa 25 guutuu Wayyaaneef ashikarii ta’aatanii, Golaa fi Golgaa Uummata Oromoo sakkaataasiftanii, Gootota Oromoo kaan biyyaa baasiftanii, kaan mana hidhaa tti guursiftanii, kaanis ajjeesiftanii, seenaa sammuu nama dhiigisu, madaa hin qoorre dalgdaniittu! Amma hoo isin hin ga’uu?
Bara Xaaliyaanii warri “Baandaa” jedhaman, jechuun warri lammii gananii, Xaaliyaanii jala galanii, Uummata gabroomsisaa turan, waggaa muraasa keessatti Uummata waliin ta’uu dhaan, Xaaliyaani tti garagalanii, kan shim godhanii, kaan bakka dhuftee tti deebisan. “Nut OPDOn miliyoona ja’aa (6,000,000) ol taanaa” jechaa turtan. Miseensi hagana heddummatu kun “Isin ga’ee Wayyaanee nu’rraa bu’aa! Oromiyaan Oromoo dhaan buluu qabdi! isinis Tigiraay bulfadhaa! Sabaa fi sablamoonni hundumtuu naannoo isaa haa bulfatan! Yoo xiqqaatee xiqqaatee gaaffii Federaalismii dhugaa Jaarmiyaan Siyaasaa OFK gaafataa turan hojii’rra ooluu qaba!” jettanii Uummata mitii ofumayyuu gabrummaa jalaa hin baaftanii? Maal Jaarmiyaan miseensa haga kanaa qabu kan xiqqumallee hin falmanne Shinkurtaa dha moo Dinnichaa?
“Finfinnee keessa tti, Afaan keessaniin akka dubbattan, Bakkee Bashannanaa waan akka mana fiilmii fa’aa akka banattan isiniif hayyamneerra! Bakkee tokko tokkos maqaa siniif jijjiruu ni dandeenya, Faayidaan addaa Uummanni Oromoo Finfinneerraa argachuu qabu kkf dha!” yeroo isiniin jedhan mee sammuun keessan maal isiniin jedha? Silaa kan ta’uu qabu, Oromootu warra Federaalaa tiifis ta’e warra TPLF tiif “bakka akkanaa, Waajira akkanaa…siniif hayyamneerra” jechuun qaba ture malee, Diinqa Uummata Oromoo tti seenee “shuukkaa dhaa bishaan dhugaa!” jedhee alagaan ajaja bitaachaa fi safuu cabse kennuu hin qabu ture. Kanaaf yoo duu’a, du’a lama hin duutani, du’a tokko’mmoo du’uun silattuu eenyuufuu waan hin oolle.
Kanaafuu FinicilaDiddaaGabrummaaOPDO labsaa. Uummanni Oromoo akka isin cina dhaabatu waamicha dabarsaa! Hidhamtoonni siyaasaa akka gad lakkifamuu qaban Wayyaaneef dhaamsa dabarsaa! Jaarmiyaan Siyaasaa biyya baqaa keessa jiran (bifa seera qabeessa ta’een, qaamni 3ffaa garee lameen jidduu tti argamee), haala-duree tokko malee biyya tti deebiyanii mirga guutuun socho’uu akka qaban labsa dabarsaa! Caasaa dhaan ajaja waliif dabarsaa! Labsa keessaan Wayyaaneen akka fudhattu tti sochii jabaa taasisaa! OPDO miliyoona ja’atu erga takkaa socho’a jechuu miti, hagi tokko sochii cimaa yoo gaggeesse inni kaanis itti dabalamaa deema. Gabrummaa aguuggattanii Uummata Oromoo tti aguugdan kaasaa bahaa!! Dammaqaa!…..
Via Oromummaa Wtuoga
Keekiyyaa Badhaadhaa “Oromoo jalaa Karaa Ga’llakkisii”
Hilaa lallaa lallaa, uuy, hubattee, hubattee?
Allaamudin Shaakkisoo hin bahu jedha
Itti qophoofnee jirra qeerroon! PPn Bilixiginnaa Diina oromoo ti !!